ဆန်နီနေမင်း: အသက်ငယ်ဆုံးရဟန္တာ မိန်းကလေးများ မရှိဘူးလား
အသက်ငယ်ဆုံးရဟန္တာ မိန်းကလေးများ မရှိဘူးလား
မေး။ ။ ဗုဒ္ဓစာပေနဲ့ပတ်သတ်တာတွေ ရေးတာကလည်း ဘုန်းကြီးတွေက များနေတယ်။ တရားဟောတာကလည်း ဘုန်းကြီးတွေပဲဆိုတော့ မိန်းမတွေဘက်က ထူးချွန်တဲ့သူတွေကို သိပ်မသိရဘူးဖြစ်နေတယ်။ တပည့်တော်ပဲ မကြားဘူး။ မဖတ်ဘူးလို့လားတော့ မသိဘူး။ အသက်ငယ်ဆုံးနဲ့ ရဟန္တာဖြစ်တဲ့ ရဟန်းမိန်းမ(ဘိက္ခူနီမ)တွေ မရှိဘူးလားဘုရား။ ရှိရင် သိချင်ပါတယ်။ အရှင်ဘုရားအားရင် ဖြေပေးပါဘုရား။
ဖြေ။ ။ ဒီမေးခွန်းကတော့ ဦးဇင်းကျမ်းအတွက် ရေးထားတာရှိနေတာမို့ ဦးဇင်းကျမ်းကနေပဲ ထုတ်နုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဦးဇင်းဒေါက်တာကျမ်းအတွက် ဘိက္ခူနီမ ဆိုင်ရာတွေ လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ အဓိကကျမ်းထဲမှာပါထည့်လို့ရတဲ့ အကြောင်းအရာကို တွေ့မိခဲ့တယ်။ အဲဒါကတော့ ဘိက္ခူနီမတွေထဲမှာ အသက်ငယ်ဆုံးနဲ့ရဟန္တာဖြစ်သူ (၃)ဦးပါ။ သူတို့အကြောင်းအရာတွေ အကုန်မဟုတ်တောင် ဘိက္ခူနီမတွေထဲမှာ အထူးခြားဆုံးအဖြစ် ကျမ်းထဲမှာထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ခု သိချင်တဲ့လူကလည်း လာမေးတာနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတာဆိုတော့ ဦးဇင်းစာဖတ်ပရိသတ်များပါ ဗဟုသုတအဖြစ် မှတ်သားနိုင်အောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အသက်(၇)နှစ်အရွယ်နဲ့ ရဟန္တာထေရီမဖြစ်ပြီး တန်ခိုးဣဒ္ဓိပါဒ် အဘိညာဉ်ခြောက်ပါးရရှိသူ (၃)ဦးကတော့ ပဉ္စဒီပိကာထေရီ။ ပဉ္စဒီပဒါယိကာထေရီ။ ဧကူပေါသထိကာထေရီတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အကြောင်းကို အကျယ်တ၀င့်ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အပါဒါန်ပါဠိတော်၊ ဒုတိယအုပ်၊ စာမျက်နှာ(၂၀၀)ကနေ စဖတ်ကြည့်ကြပါ။
ဦးဇင်းကျမ်းအတွက်တော့ အောက်ပိုင်းအတိုင်း ရေးလိုက်ပါတယ်။ ဗဟုသုတအဖြစ် ဖတ်ကြည့်ချင်သူများ ဖတ်ရအောင် ထည့်လိုက်တာပါ။ (ကွင်းစကွင်းပိတ်နဲ့ဟာတွေကတော့ The Pali Text Society (PTS)မှ Roman နဲ့ ရေးထုတ်ဝေထားတဲ့ နိုင်ငံတကာသုံး ပိဋကတ်ကျမ်းကိုးများ ဖြစ်ပါတယ်။)
The Pāḷi canons mention three Arahant Therīs Pañcadīpikā Therī, (Ap,II,p. 524) Ekūposathikā Therī (Ap,II,p. 519-521) and Pañcadīpadāyikā Therī.(Ap,II,p. 527-8) Who had attained the Arahatta-magga soon after their admission into the Saṃgha as Sāmaṇerīs at the age of seven. They were possessed with the Paṭisambhidāmagga, four penetrative wisdoms, and Abhiññā, the six types of psychic or divine powers.
ဦးဇင်းစာဖတ်ပရိသတ်များ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာပြီး လိုရာပန်းတိုင်ကို လျင်မြန်စွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလျက်....။
Posted by ဆန်နီနေမင်း at 3:45 PM